Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy lany taranaka ny salobokomana | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy lany taranaka ny salobokomana
Misy amin’ireo tanora mipetraka eny amin’ny vohitra manodidina ny lemak’i Betsimitatatra no mitonona ho mahafantatra izany vorona nomena anarana hoe salobokomana izany. 25 taona lasa izay, mbola nisy izy ireo niharo tamin’ny vano sy vorompotsy izay samy mihaza trondro sy bibikely an-drano foto-tsakafon’ireo vorona ireo. Ny vano dia miandrandra lanitra mba hanitsiny ilay tendany lava dia lava iny mba hahafahan’ny trondro mitsotsorika velona any amin’ny vavoniny. Ny salobokomana kosa, rehefa mahazo haza na trondro izany na bibikely dia mamelatra elatra mba hanakonany ilay sakafo tsy an-kizara, izay no nanomezana azy io anarana io.
Nitsoaka niatsampy any amin’ny farihy lavitra angamba izy ireo, toy ny olona mifindra monina raha lany mamy ny tany ipetrahana. Tsy izy intsony Betsimitatra. Voatototra avokoa ny tanimbary, ny honahona sy ny lakan-drano ary ireo dobo. Any ambadik’i Bongolava any na any Alaotra na any Madirovalo no mialokaloka angamba izy ireo.
Na adinodinon’ny maro aza ny fisian’ireny vorona ireny teto amin’ny manodidina ny renivohitra, ny fisalobokomana sy ny fihinanan-drery misy tafajanona. Saingy angamba tsy mitsahatra no mitsaingoka sy misalobona ireo mpandova izany fanao izany. Olombelona ihany hono ka tsy ilaozan’izay ho azon’ny fakam-panahy. Andeha atao hoe marina ihany izay. Ny mahaloza azy anefa dia lasa fomba raiki-tapisaka ho an’ny maro, ny tànana mitsotra tsy menatra intsony, ny mpitazana tsy rototra noho izany.
Tsy misy mahafantatra anefa hatraiza ny fetra, eo ny faharetana eo ihany koa ny fandeferana na angamba ny fizakana fahoriana. Ireny izao nisy toetra-na vorona izay nisy nandova, izany hoe ny olona koa ve mety hivadika biby ? Efa misy moa fiteny mampitandrina momba izay tranga mety hiseho izay. Tsy dia ho raisina ara-bakiteny akory sanatria, fa na ny hoe ny tsy fifehezantena intsony fotsiny aza fa ny fivahana noho ny haromotana dia efa mety ampitranga zava-doza. Tsy olona tokana anefa no atao resaka eto fa andian’olona na fokonolona izay tsy fantatra rahoviana no mety hirongatra avy ao ankibon’ny mponina.